I-Altos del Maria Mountain retreat Sixpence - I-Airbnb
I-Altos del Maria Mountain retreat Sixpence
Panama West, Panama, i-Panama
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Dave & Debbie
U-Dave & Debbie Ungumbungazi ovelele
I- casita yethu ethokomele enefenisha ephelele yokuziphekela emphakathini ophephile/obiyelwe wase-Altos del Maria usezintabeni zase-Panama. Ehlelwe emgwaqweni othulile ofile, ulala abantu ababili ngokunethezeka. Phumula e-Casa Bermuda ku-hammock ethala langasese futhi ujabulele ukubuka izintaba kude nakho konke!
I- casita enhle enefenisha ephelele etholakala e-Altos del Maria, e-Chame, ezintabeni zase-Panama ngamamitha angu-900 ngaphezu kolwandle, cishe ihora eliyi-1 1/2 ukusuka e-Panama City. Kukhona ikhishi elinakho konke, umbhede owodwa we-queen, indlu yokugezela yangasese eneshawa yamanzi ashisayo, indawo yokuhlala enesihlalo sothando, umshini wokuwasha/wokomisa, i-inthanethi kanye ne-satellite TV kanye nethala langasese lokubuka izintaba.
Le casita ethokomele iyindawo ekahle kakhulu yokuphumula kwezithandani yabantu abadala abangu-2.
Jabulela amazinga okushisa aphakathi kuka-68°F no-75°F (20ºC no-24ºC) unyaka wonke ngenkathi ujabulela ukuhamba ehlathini noma eceleni komfula i-Maria. Vuka ngemisindo yezinyoni nomfudlana ogijima eduze kwe-casita.
Jabulela imizila emihle yokuhamba, ukubukeka okuhle kwezintaba, imifudlana, izimpophoma nomgodi wokubhukuda wemvelo e-Rio Maria. Imvelo ihamba phambili!
Ibungazwe ngu-Dave & Debbie
Siyakuthanda ukuhlangana nabantu abasha!. Sihlala eduze komnyango we-casita futhi sivame ukuba sekhaya lapho izivakashi zethu zifika.
UDave & Debbie Ungumbungazi ovelele